आज माघ २७ गते, मंगलवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल – Krazy NepaL
आज माघ २७ गते, मंगलवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
February 9, 2021 960
२०७७ माघ २७ गते, मंगलवार, ९ फेब्रुअरी २०२१। माघ कृष्णपक्ष, त्रयाेदशी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र (१४ः३६ बजे उप्रान्त उत्तराषाढा), चन्द्रराशि– धनु।उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४
शारीरिक कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। बाध्यताले अलमल्याउन सक्छ। अरूका लागि समय, धन र बुद्धि खर्चनुपर्ला। तापनि, लगनशीलताले समस्या समाधान गर्न सकिनेछ। काम पूरा नभए \_नि उपलब्धिकाे स्राेत प्राप्त हुनेछ। सामुदायिक जिम्मेवारी वहन गर्ने समय छ। चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हातलागी हुन सक्छ।
Nextशरीरका अनावश्यक रौँ हटाउन मन छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्